Nhungamiro Yekugadzirisa Yako Email Kuvhura, Dzvanya-Kuburikidza, uye Shanduko Mitengo | Martech Zone
Imwe hurukuro yandinayo vhiki rega rega nevatengi ndiyo nzira inowedzera inovhiringidza yekuvaka nekusimbisa yakabudirira email yekushambadzira chirongwa. Zvichitaurwa zviri nyore, sezvo yako email yekushambadzira runyorwa ichikura, saizvozvowo kugona kwako kutenderera musoro. Zvinotaridza sekuti vanopa internet basa vakasiya chero tariro yekupa mubayiro maitiro akanakisa uye vanongova mbeveve algorithms inoramba ichiranga vanotumira vakanaka.
Case in point, mumwe wevandaishanda navo muindastiri akawana Yahoo! ichivharira 100% yeemail yake - kunyangwe yake chikuva inonamatira kune ese indasitiri standard uye yakanakisa tsika yakanyorwa ne Yahoo! postmaster. Seyedzo, akaendesa tsamba yake kuendesa kune nyowani IP kero uye ake maemail akatanga kupfuura pasina nyaya. Zvimwe chete zvirimo, vanyori chete, rakangofanana rakasiyana IP kero. Dzimwe nguva ndinofunga ISPs zvinongovhara ma IP kero kuti ndione kana kambani inopindura. Zvirinani Yahoo! yakaramba maemail, kunyangwe… mamwe maIPs mazhinji achingovaendesa kunjunk folda isingazivikanwe kumutumiri.
Zvechokwadi, pane email kushambadzira zvikanganiso zvaunogona kudzivirira paunenge uchigadzira runyorwa uye zvemukati. Zvakare, pane nzira dzinoverengeka dzekugadzirisa yako email. Izvi infographic, Email Kushambadzira Kugadziridza Hacks & Kosi Zvidzidzo, kubva ku99Firms tsananguro dzakawanda nzira dzekuvandudza. Ini handisi fan hombe yetemu Hack… Ini ndinoona kuti dzese nzira idzi dzakakodzera kuyedzwa neemail chirongwa chako.
Email Optimization Nzira Dzinosanganisira
Musoro Mutsetse Optimization - Maalgorithms uye anonyorera maitiro zvaita kuti mutsara wenyaya uve chinhu chakanyanya kukosha chekutora email kana kubaya. Makambani mazhinji ari kusanganisira emoji naizvo.
Wepamberi Chinyorwa - Patakatsiva yedu yekumira tsamba yekutsikisa preheader zvinyorwa zvine simba zvinyorwa zvakavakirwa kubva kune yedu tsamba tsamba, takaona kukurumidza kuwedzera kwekuiswa kweinbox uye yakavhurika mitengo. Vanhu vanoverenga zviongorori - tora mukana izvo!
Sender Zita - 68% yevaAmerican vanovhura email yavo zvichibva pa "Kubva Zita" ravanoona. Yako Kubva pazita inomiririra kambani yako zvakanaka? Inoenderana nekero yako yeemail?
Segmentation - Kugovanisa email yako kushambadza runyorwa uye kunongedza zvemukati zvinotyaira zvinoshamisa mhedzisiro asi inowanzo kufuratirwa nekuda kwekuoma kunowanikwa Izvo zvakakodzera kuedza uye mazhinji emaemail ekushambadzira mapuratifomu anoitsigira.
Personalization - Enda kupfuura [Isa zita rekutanga] uye upe ruzivo mumushandirapamwe wako weemail yakanangana neruzivo rwewekunyorera uye nhoroondo yekutenga. Vatumeri veemail vakaona 92% inowedzera mumari uye kaviri mwero wekushandura kana maemail akagadzirwa.
Kushandisa michina uye Triggering - Nguva ndeye zvese, saka kugamuchira email inoenderana netarisiro yako kana maitiro evatengi zvakakosha kusimudzira hukama kumberi.
Mabhatani uye Kudanwa-Ku-Kuita - Kana iwe ukafananidza email yako seye rinomhara peji, pane iko kufona-kune-chiito kutyaira iye anonyorera kune inotevera nhanho yekuita neyako mhando? Kana zvisiri, urikushaya mukana wakakura wekukwirisa email yako.
Images - Mabhokisi emumaInbox akabatikana, saka kutarisira anonyorera kuti averenge mazwi ese akagadzirwa zvine hungwaru awakaisa muemail yako hazvingamboitika Wedzera kubatanidzwa uye tinya-kuburikidza nekupa inomanikidza mifananidzo kukwezva munhu anoverenga kuti averenge nekudzvanya. Wedzera animated maGIFs kuti uwedzere kumwe kunhu!
Video - Kunyange akawanda mapuratifomu eemail asingatsigire zvakakwana vhidhiyo, unogona kumbopa skrini yevhidhiyo yako nebhatani rekutamba. Kana iye anonyorera akadzvanya bhatani rekutamba, vauye navo kune iro peji iro auto rinotanga vhidhiyo yavo!
Kutya Kupotsa (FOMO) - kugadzira pfungwa yekukurumidzira kutenderedza maemail ako kunogona kutyaira akavhurika mareti uye ekushandura mitengo zvakanyanya. Ini ndinoda kusanganisa yekuverengera mifananidzo kune kutyaira kumba chinhu chekuti kune kupera kunosanganisirwa nechipo.
Nguva - Kanganwa iyo nguva yakanakisa yekutumira zvisina maturo. Edza nguva dzakasiyana dzekutumira email yako wozotumira kana yaita mutsauko mukuru. Iwe unogona kutoshuvira kukamura uye kudzedzereka kutumira kunoenderana nenzvimbo dzenguva.
Kupindura Kwenhare - 42% yeemail ese anovhura anoitika pane mbozhanhare. Wakambotarisa email yako kuti uone kuti inotaridzika sei pane mbozhanhare? Iwe unogona kushamisika, kana kuvhunduka, pamhedzisiro yeiyo email isina kugadzirwa yakagadzirirwa.
Email Zvemukati - Iyo nhanho yekuverenga uye kureba kwemakopi kunogona kukanganisa yako yekudzvanya-kuburikidza uye shanduko mitengo.
Email Formatting - Wamboedza here kutumira email chete kwete email yeHTML kuti uone kuti musiyano wekupindura chii? Kunyange maemail eemaHTML angave akanaka, vangangotadza kutariswa nemeseji yeemail!
Heano akazara infographic, pamwe chete nezvimwe zvinonakidza chokwadi uye manhamba mukati!
Tags: nguva yakanakisa yekutumiraemail kushandisa michinaemail mabhataniemail kufona kuitaEmail Zvemukatiemail kuumbwaemail mifananidzoemail purogiramu yekutengesaemail optimizationtsambambozha personalizationemail inotungamiraemail chidimbuemail kutumira nguvaemail inotumiraemail chinyorwaemail inotangaemail vhidhiyokutya kutyafomokubva pazitahtml emailNewsletteroptimizationyakajeka mavara emailpreheader zvinyorwasender zitamutsara wenyayayokuedzwa